ဘာသာတရား (Religion) ကမ္ဘာ့သမိုင်းတွင် အရေးကြီးသော အခန်းကဏ္ဍတစ်ရပ်အနေဖြင့် ပညာရေးဆိုင်ရာလေ့လာမှု၌ ဘာသာတရားဟူသော ဝေါဟာရကို၊ တစ်နည်းအားဖြင် Religion ဟူသော အင်္ဂလိပ်စကားလုံး၏ အဓိပ္ပာယ်ကို ရှုထောင့်အထွေထွေမှ တွေးမြင်သုံးသပ်နိုင်ပေသည်။ ဘာသာတရားဟူသည် နာမ်ပိုင်းဆိုင်ရာ အတွေ့အကြုံပိုင်းဖြစ်ပါသည်။ အယူဝါဒရေးရာ လေ့လာဆန်းစစ်ချက်သီအိုလိုဂျီ သို့မဟုတ် တတ်သိလိမ္မာသူ ပညာရှင်တို့၏ အယူဝါဒ ပုံဖော်မူတစ်ရပ်ဟူ၍လည်း ရှုမြင်ကြပေသည်။ ဘာသာတရားဟူသည် လူမှုကိုယ်ကျင့်တရား၏ မြစ်ဖျားခံရာ ပဓာနအရင်းအမြစ်ဖြစ်သကဲ့သို့ လူ့ဘောင်လောကအတွက် ကိုယ်ကျင့်သိက္ခာ စည်းမျဉ်းများ၏ အခြေခံအုတ်မြစ်လည်းဖြစ်သည်။ လူ့ယဉ်ကျေးမှု၏ ပဓာန အရေးကြီးသော အခန်းကဏ္ဍတစ်ရပ်ဖြစ်သည်မှာ ထင်ရှားလှပေသည်။
ဘာသာတရား အစ ကိုးကွယ်မှုက
ဘာသာတရား၏ သဘာဝနှင့် အဓိပ္ပာယ်ကို ပညာရှင်တို့သည်လည်း မိမိတို့ စရိုက်ဝသီအတိုင်း အမျိုးအမျိူး ရှုမြင်ကြသကဲ့သို့ ခြားနားများပြားသော ထင်ကြေးများကိုလည်း ပေးကြလေသည်။ အယ်လ်ဒပ်စ် ဟပ်စလေ (Aldous Huxley) ၏ အဆိုအရ ဘာသာတရားဟူသည် အဓိကအားဖြင့် ပညာရေးစနစ်တစ်ခုဖြစ်ပြီး ယင်းဖြင့် လူသားတို့သည် မိမိတို့၏ ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးပေါ်တွင်လည်းကောင်း၊ မိမိတို့လှုပ်ရှားကျင်လည်နေရသော လူမှုအဖွဲ့အစည်းပေါ်တွင်လည်းကောင်း လိုလားနှစ်သက်အပ်သော အပြောင်းအလဲများ ပိုင်ဆိုင်ရရှိစေရန် မိမိတို့ကိုယ်ကို ပထမလေ့ကျင့်နိုင်သည်။ ဒုတိယအဆင့်တွင် သိမြင်မှတ်သားမူဆိုင်ရာ သတိစွမ်းရည်ကို မြှင့်တင်နိုင်ပြီး၊ ဤသို့ဖြင့် နေထိုင်ရာ သဘာဝစင်္ကြာဝဠာနှင့် သူတို့အကြား ကူးလူးဆက်ဆံမှုများ၏ လုံလောက်ပြည့်စုံမှုကို တည်ဆောက်ဖန်တီးနိုင်ပေသည်။
ဗုဒ္ဓဂေါတမ၏ ဘာသာတရားကို ဘဝနေထိုင်မှုလမ်းစဉ်တစ်ရပ်အဖြစ် အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုချက်မှာ "မကောင်းမှုဟူသမျှကို ရှောင်ကျဉ်ခြင်း၊ ကုသိုလ်ကောင်းမှုများကို ပွားများအောင် အားထုတ်ပြီး ဘဝကို ပျိုးထောင်မြှင့်တင်ခြင်း နှင့် ကိလေသာ အညစ်အကြေးမှ ကင်းဝေးစေလျက် မြင့်မြတ်ဖြူစင်စေသော စိတ်နှလုံးကို အစဉ်ထိန်းသိမ်းခြင်း" (ဓမ္မပဒ၊ ၁၈၃) ဟူ၍ဖြစ်သည်။ ကမ္ဘာပေါ်တွင် ဗုဒ္ဓဘာသာသည် လူဦးရေ သန်းပေါင်း ၁၉၂၁ ၉၈၉ ၆၄၁ ခန့်အထိ ကိုးကွယ်ယုံကြည်သော ဒုတိယ အကြီးဆုံး ဘာသာတရားနှင့်အယူဝါဒဖြစ်သည်။ တရုတ်ပြည် သည် မဟာယာန ဗုဒ္ဓဘာသာလူဦးရေ အများဆုံး နိုင်ငံလည်းဖြစ်သည်။ တရုတ်ပြည်တွင် လူဦးရေ သန်းပေါင်း ၁၂၁၉ ၁၄၉ ၆၀၀  ခန့်အထိ မဟာယာန ဗုဒ္ဓဘာသာကို ကိုးကွယ်ယုံကြည်သည်။ ထို့ကြောင့်ဗုဒ္ဓဘာသာသည် ကိုးကွယ်ယုံကြည်သူ လူဦးရေအားဖြင့် ဒုတိယအများဆုံး ကမ္ဘာ့ဘာသာနှင့် အကြီးထွား အမြန်ဆုံးသော ဘာသာတစ်ခုလည်း ဖြစ်သည်။  
(၄) အစ္စလာမ်ဘာသာ၏အယူဝါဒမှာ တမန်တော်မိုဟာမ္မဒ် ရရှိခဲ့သော ဝဟီ ကောင်းကင်ကျ ဗျာဒိတ်တော် “ကုရ်အာန်ကျမ်းစာ” လာ အဆို အမိန့်များကို လက်ခံ လိုက်နာ ကျင့်သုံး၏။ သက်ရှိ၊ သက်မဲ့အရာအားလုံးကို ဖန်ဆင်းနိုင်စွမ်းရှိသည်ဆိုသော “ အလ္လာဟ်” ထာ၀ရ ဘုရားသခင် ဖန်ဆင်းရှင်ကို ယုံကြည် သတ်မှတ် ဆည်းကပ် ကိုးကွယ်၏။ အစ္စလာမ်ဘာသာ ဝင်များက There is No God But ALLAH. and Muhammad is the messenger of ALLAH. အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်မှတစ်ပါး အခြားကိုးကွယ်ရာ ဘုရားမရှိ။ တမန်တော် မိုဟာမ္မဒ်သခင်သည် အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်၏ နောက်ဆုံးစေလွှတ်သော တမန်တော်ကြီးဖြစ်သည် ဟုသက်ဝင်ယုံကြည်ကြ၏။ အရဗီဝေါဟာရ "အလ္လာလ်"သည် "သန့်ရှင်းစင်ကြယ်သော၊ အတုမရှိသော၊ ပြိုင်ဖက်ကင်းသော" ဟူသော အနက်များပါဝင်သည်။ အဂ်လိပ် ဝေါဟာရ "God" နှင့် ၎င်း၏ဝေါဟာရ အနွယ်ဝင် စကားလုံးများနှင့် အဓိပ္ပါယ်ကွားခြားပါသည်။ အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်တိုင်းသည် မည်သည့်လူသားဘုရား(အဖန်ဆင်းခံများ)ကိုမျှ ကိုးကွယ်ရာ ဖန်ဆင်းရှင်အဖြစ် လုံးဝလက်မခံကြပါ။ အစ္စလာမ်ဘာသာ အရ "ကိုးကွယ်ရာအရှင်" ဟူသော အတိကျဆုံးသော အဓိပ္ပါယ်သတ်မှတ်ချက်ကို စူရာဟ် အိခ်လာဆ် (ကုရ်အာန်ကဏ္ဍ အမှတ် ၁၁၂)ရှိ အာယသ်တော်(၄)ခုက အတိအကျဖွင့်ဆိုထားပါသည်။ (၁) အို−နဗီတမန်တော် အသင်သည် ပြောကြားပါလေ။ ထို အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်သည် တစ်ဆူတည်းဖြစ်တော်မူ၏။ (၂)အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်သည် လိုလားတောင့်တခြင်း လုံးဝကင်းရှင်းတော်မူသောအရှင်၊ သူတစ်ပါးတို့၏ မှီခို အားထားရာအရှင်၊ အနှိုင်းမဲ့ထာဝရအရှင်ဖြစ်တော်မူ၏။ (၃)ထိုအလ္လာဟ်အရှင်မြတ်သည် မည်သူတစ်ဦးတစ်ယောက်ကိုမျှ မွေးဖွားတော်မူခဲ့သည် မဟုတ်ပေ။ မည်သူတစ်ဦးတစ်ယောက်၏ မွေးဖွားခြင်းကိုလည်း ခံရတော်မူသည် မဟုတ်ပေ။ (၄)ထိုမှတစ်ပါး ထိုအလ္လာဟ်အရှင်မြတ်၌ ဂုဏ်ရည်တူသူ ဟူ၍လည်း တစ်ဦးတစ်ယောက်မျှပင် မရှိပေ။
မော်ကွန်းတင်ပြီးမိတ္တူ။5September 2013 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။7June 2013 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
Buddhists in the World - The Dhamma - thedhamma.com - Vipassana Foundation။ 25 December 2018 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။7June 2013 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
Buddhism As A Religion by K Sri Dhamananda
ဘာသာမဲ့ အယူဝါဒ...အောင်ကျော်မိုး ...(မြန်မာနိုင်ငံ ဘာသာမဲ့များအဖွဲ့ http://www.facebook.com/groups/irreligions.myanmar